Tiigso – ???
ERAY SOOMAALI AH OO LEH MICNAYAAL ISKA SOO HORJEEDA
Tiigso.com December 13, 2015 0
Erayga “dhageysi” waa eray Soomaali ah oo leh micneyaal iska soo horjeeda. Waa eray hadba micnaha ad ka rabtid yeelanaya. Isagoo kaligiis ah oo ayan raacin wax arayo ah oo kale ayuu yeelanayaa micneyaal
MAXAY MADAXDA SOOMAALIDU U JECESHAHAY IN LOO HEESO?
Tiigso.com September 28, 2015 0
Waa maxay sabahbaha ka dambeeya in loo heeso madaxda Soomaalida? > Horta ma wax ay madaxdu wadato oo amartaa mise waa wax lala hoos ordayo oo sumcad iyo kharash laga rabo? > Hanti dadweyne
MUHIMADDA 7 XARF OO LABANLAABMA
Tiigso.com August 6, 2015 0
Waxaan ognahay, in xarfaha labanlaabmaa leeyihiin muhimad iyo macne weyn, taasoo ah sababta keentay inay labanlaabmaan. Macnaha, maaha wax la iska dhaafi karo oo xarafkii loogu tala galay inuu labanlaabmo lagama dhigi karo mid
KA WARRAN, HADDII AYAN LABADAAS CILLADOOD KA JIRI LAHAYN DALKEENNA?
Tiigso.com April 5, 2014 0
Xaggee dhibaato kale inooka iman lahayd, haddii ayan jiri labada cilladood oo hoos ku qorani: ku diririd/isku qabsi xukunka dadweynaha xatooyo, xisaabtan la’aan iyo ku tagrifalid xoolaha dadweynaha. Ma jirtaa bulsho horay u martay
MAXAY FAJIISTADII U HITLER HOGGAAMINAYEY U XASUUQDAY YUHUUD?
Tiigso.com April 2, 2014 0
Wixii kasta oo aadamigu sameeyo wax uun baa looga dhigaa sabab – ha jireen waxaasi ama yay jirine. Dalka Jarmalku isagoo xoog leh oo xoog iyo ciidan ka buuxa ayuu galay dagaalkii 1aad oo
HOOYO IYO CARUURTEED MA UGA HIILLIN LAHAYD DHURWAAYO?
Tiigso.com March 26, 2014 0
Waa la hubaa, in dadka intiisa badani uga jawaabi lahaayeen su’aashaas haa, ugana hiillin lahaayeen hooyo iyo carruur khatar ku jira oo dhurwaa ku hareereeyey meel cidla ah. Waa arrin muhiim ah, mase aha